Shiinuhu inuu xogta ka guuro dalka ka dhigo arrin ku saabsan amniga qaranka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Shiinuhu inuu xogta ka guuro dalka ka dhigo arrin ku saabsan amniga qaranka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dib u eegista amniga gudaha waa in lagu maraa cadadka, baaxadda, kala duwanaanta iyo sirta xogta lagu bixinayo dibadda, lana qiimeeyo khatarta ay tallaabadaasi ku yeelan karto danaha dawladda iyo dadweynaha iyo xuquuqda sharciga ah iyo danaha shaqsiyaadka iyo ururada.
Hay'adaha doonaya in ay xogta dibadda ku bixiyaan waxa ay hoos iman doonaan dib u eegista dawladda Shiinaha.
Haddii xogta loo gudbin doono si badbaado leh iyada oo aan waxyeello iyo daadad la'aan dib loo eegi doono.
Xeerka qabyada ah waxaa loo siidaayay si loogu codsado ra'yiga dadweynaha, ayaa lagu yiri bayaanka maamulka hawada sare ee Shiinaha (CAC).
The Maamulka Hawada Sare ee Shiinaha (CAC) Waxaa maanta la soo saaray sharci qabyo ah, kaasoo ku dhawaaqaya in dhammaan hay’adaha doonaya in ay xogta dibadda ka keenaan ay dib u eegis ku sameyn karaan amniga gudaha, mararka qaarna, ay dowladdu dib u eegis ku sameyn doonto.
Xeerka qabyada ah waxaa loo siidaayay si loogu codsado ra'yiga dadweynaha, ayaa lagu yiri bayaanka CAC.
Dib u eegista amniga gudaha waa in lagu maraa cadadka, baaxadda, kala duwanaanta iyo sirta xogta lagu bixinayo dibadda, lana qiimeeyo khatarta ay tallaabadaas ku yeelan karto danaha gobolka iyo dadweynaha iyo xuquuqda sharciga ah iyo danaha shaqsiyaadka iyo ururada, ayaa lagu yiri dukumeentigu.
Haddii xogta loo gudbin doono si badbaado leh oo aan waxyeello lahayn iyo in kale waa in dib loo eego, ayay raacisay.
Haddii xogta laga soo ururiyo mashaariicda waaweyn ee kaabayaasha IT ee gudaha Shiinaha ama ururiyaha ayaa ka shaqeeya bangi xog ah oo ay ku jiraan macluumaadka shakhsiyeed ee 1 milyan qof ama ka badan, dib u eegista amniga waa in loo gudbiyaa CAC.
Dukumentiga ayaa sheegay in CAC Waxa kale oo ay mari doontaa dib-u-eegis amni oo lagu wadaagayo macluumaadka shakhsiyeed ee dibadda ee 100,000 qof ama ka badan.